Magaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenya hedduu mancaase – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMagaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenya hedduu mancaase
Magaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenya hedduu mancaase
OMN Horn: Odeessaalee Har’aa (Hagayya 17, 2021)
OMN: Oduu (Hag,17, 2021)
Magaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenya hedduu mancaase.
Hagayya 17,2021 waaree booda rooba humna guddaatiin roobe sababeeffachuun magaalaa Finfinnee bakkeewwaan tokko tokkotti, sababa lolaatiin balaan qaqqabuu Bulchiinsi Magaalichaa ifoomseera.
Kantiibaan magaalaa Finfinneefi miidiyaalee mootummaa balaa lolaa uumamee kana sababeeffachuun lubbuun darbe kan hin jirreefi balichis to’atamuu ibsanis akka OMN odeeffatetti, bakkeewwan muraasatti hanga yoonaa balaan qaqqabe kan hin qulqulla’in jiruufi daa’imman mana keessatti lolaan itti seene barbaadamaa kan jiranidha.
Magaalaa Finfinnee Naannoo Xoor haayiloochiifi Asiraa simmit jedhamuun beekaman balaa lolaatiin rakkoo saphaa qabeenyaafi namarra qaqqabuu kan odeeffanne yoo ta’u, Bakkanniisaa naannoo Addabaabayi Jarmanitti garuu balaan uumame ammallee hin tasgabbaa’in jiraachuusaa OMN nama bakka sana jirurraa odeeffateera.
Mooraa waaqeffannaafi kolleejjii Siminarii Makana Iyyesuus jedhamu keessatti sababa lolaatiin kuufamni bishaanii humnaa ol ta’e qaqqabuun hanga yoonaa yaaliin lubbuufi qabeenya balaarraa oolchuu godhamaa jiraachuus maddi OMN dubbise himee jira.
Namootni mooraa ala jiraniifi mooraa keessa jiran bilbilaan wal dubbisaa jiraachuu kan himu maddi keenya kun, daa’imman xixiqqoon mooricha keessa jiran haala ulfaataa keessa jiraachuufi gariin haala kam keessa akka jiran kan hin beekamne ta’u odeeffanneerra.
የነፃነት ታጋዬች ጥምረት እና የብልጽግና ድንጋጤ, ኬሎ ሚዲያ